Ndakabatiswa zibeche ramaiguru - Part 2 - Maiguru vakangoshinyira ndokubva vatunda apa ndisati ndavasvira! - Masasi eHarare
DzeBonde Ndakabatiswa zibeche ramaiguru – Part 2 – Maiguru vakangoshinyira ndokubva vatunda apa...
Ndakabatiswa zibeche ramaiguru – Part 2 – Maiguru vakangoshinyira ndokubva vatunda apa ndisati ndavasvira!
Chokwadi ndakadzidziswa namaiguru vangu zvokuti ndakati chero pa Maths dai ndaiva na Teacher akadai ndaitopasa chete. Maiguru vakabva vati bamunini yava nguva yenyu kuti ndione kuti zvamadzidza mazvibata here kana kuti ndakangoti okay apa tese tiri musvo zimboro richirembera, ummm ndikazvifunga so ndakanyatsovaradzika vakatarisa mudenga ndikati chekutanga vati ndofanirwa kutsva pane zemo rose pekuti ukabata mukadzi anobva anzwa kuti yaa ndakuda mboro zvisinei mukutaura kwavakandiita vakati kana ukange wawana position yacho yaanoda kubatwa ukanyatso pabata bhooo umm chero kutunda mukadzi anotunda asati asvirwa.
Ndakambotanga kuvakissa ndikaona kuti haa kisi chete haisi kuita kuti vaite zemo, ndakabva ndazvisiya ndakunanga pamazamu apa kwaiva nemoto zvawo asi waiva mushoma ndakamapuruzira ndichiita twuminyasto tweku softa sekuudzwa kwandainge ndaitwa. Maiguru vakangoshinyira chete ndini uyo ndadzika ndavapa beche neruoko ndakatanga kubata ndikanzwa svakugwinha gwinha haaa pano ndopane zesa rese ndikati zvakutoda rurimi ndakaisa rurimi rwangu mubeche mamaiguru ndikanzwa haii zvino vakuda kupenga uku rumwe ruoko ruchitambisa mazamu, ndakatanga kusveta matinji avo ndokuzoti mumwena nerurimi pfee haa kuzodaro vakati vakutanga kundidhonza musoro ndakanga ndakunzi daddy.
Ndakatoona kuti ndikanonoka kubvisa rurimi rwangu mubeche umu ndingatundirwa coz magaro avo anga aomarara kuti ngaa asi hey ndakatangirwa ndakanzwa kugwinha gwinha ndikaziva kuti haa finish ndatundirwa asi nemadiro andainge ndoita beche handina kumbozvinzwa ndakatoti haaaa zvaita tese tatunda ne romance hapana achaseka umwe. Ndakatora mboro yangu iyo yainge yakurwadza nehukasha ndokumbotanga ndaikwizira pamusuwo webeche ndakadaro kwechinguva kusvika maiguru vakufemera pamusoro ndokuti musoro waya nyaa ndikanzwa vakuti yes daddy itai ndatovhura.
Ndobva ndaiti zvakare kusvika pakati payo shwee ndikanzwa vandibata kumusana vakuda kutokoira ndikati nechemoyo ndikati hoo wajaira tumboro tudiki ndini uyo ndokuzoiti yese shweee ndakanyatsonzwa kuti yess apa ndapengesa munhu zvakanzi daddy kani iiii, ndopandakati koi koi koi ndikanzwa knock ku door ah masasi ndakabhoekana kuti ko ndiani iyeye asina kurairwa anongokanganisa vamwe kufara. Maiguru vakaridza zitsamwa zvikanzi ndianiko anoita kunge atumwa nasatan chitosarai imi daddy coz kumira kwakaita mboro yenyu hamungambomuka, vakapfeka chop chop pasina nguva ndakanzwa zvakunzi titambire sisi masvika vakapinda vakanogara mudinning vakavhunzana mufaro zvikanzi ko bamunini Tapiwa varipi.